CloudCraze: Ecommerce Platform Wuru maka Ahịa | Martech Zone
CloudCraze: Ecommerce Platform Wuru maka Salesforce
Wenezdee, Jenụwarị 20, 2016 Fraịde, Ọgọstụ 26, 2016 Douglas Karr
Omume bụ isi anyị na-ahụ ugbu a na ntanetị bụ mmejuputa B2B na B2B2C site na e-commerce. Ọbụlagodi na ụlọ ọrụ gị nwere ndị ahịa ahịa, usoro mkparịta ụka, usoro ịkọwapụta, na akwụkwọ ọnụahịa na-aga n'ịntanetị. Usoro ndị a ejiri jikọta ọtụtụ sistemụ, chọrọ ntinye aka akwụkwọ, yana enweghị ike ịkọwa ya site na ikpo okwu ecommerce gị. Nke ahụ na-agbanwe ngwa ngwa na ụlọ ọrụ na-ewu ewu bụ ewu ewu Igwe ojii.
CloudCraze bụ nke izizi ma gosiputara Enterprise eCommerce Platform mepụtara nke ala na Salesforce Platform. Ọ na-anapụta ntụkwasị obi na nha nke Salesforce na ngwanrọ B2B eCommerce mgbe ị na-ekerịta data na usoro ya na nkesa Salesforce CRM dị ugbu a.
CloudCraze na-eme ka data ụlọ ọrụ B2B dị ugbu a nweta akaụntụ ndị ahịa ya na akaụntụ Salesforce ma jikọta ya na sistemụ ikpo okwu eCommerce ya. CloudCraze na-arụ ọrụ na mmeghachi omume nke ahịa ahịa Salesforce yana data mụtara iji mee ka ndị ahịa a dịkwuo mma. Lọ ọrụ ahụ ama ke Egwuregwu Forrester ™: B2B Commerce Suites, Q2 2015 ma na-eje ozi ugbu a Fortune 500 ụlọ ọrụ, dị ka Coca-Cola na Barry Callebaut.
CloudCraze Atụmatụ Gụnyere
Lọ ahịa Ebe ọ bụla, Oge obula, na Ngwaọrụ ọ bụla - Ahụmịhe Onye ọrụ na-etinye na akpaghị aka na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla nwere Mmeghachi Ahụ
Chọọ na Chọgharịa Ngwaahịa - Chọọ ngwaahịa site na aha ngwaahịa, SKU ma ọ bụ nkọwa ngwaahịa, njirimara ngwaahịa
Product Details - Lelee nkọwa ngwaahịa gụnyere aha ngwaahịa, ọnụahịa, akara, nyocha, atụmatụ ngwaahịa, nkọwapụta nkọwa zuru ezu banyere ngwaahịa, nnweta, ọkwa, nyocha, ngwaahịa ndị ọzọ, yana akwụkwọ ngwaahịa.
Nkwalite ngwaahịa - Kupọns, ngwaahịa ndị dị na nkwalite dị na ya.
Ụgbọ ibu azụmahịa - ụgbọ ala egosiputara na ndepụta-ọchịchọ, ntugharị, ụtụ isi gbakọtara, mbupu, nlele anya, nkwụnye ụgwọ, nkwenye, na email.
Njikwa Akaụntụ - historytụ akụkọ ihe mere eme na njikwa akaụntụ na ndabara ịgba ụgwọ na mbupu adreesị.
Mmekọrịta ụwa - ego mpaghara na nkwado otutu asusu. Nkwado maka ego 161 niile na asụsụ 64 niile nke Salesforce na-akwado
Storelọ Ahịa Ahịa - Jikwaa ma hazie ọtụtụ ụlọ ahịa pụrụ iche.
Analytics - wuru na nchịkọta na ịkọ ọrụ nke na-enye gị ohere ijide ma kpughee data kwesịrị ekwesị na nchịkọta Google iji bulie ozi ị nwetara.
Rịọ maka Akara CloudCraze Demo
Gbanye ụlọ ahịa mkpanaka ngwa ngwa, mepụta ntanetị na ntanetị n'ime izu, ma nwee ogo maka uto.
Tags: B2B Ahịa Suitesbarry callebautigwe ojiicoca-colaecommerceife agbaraire ereecommerce ahịaere ahịa otu
Reelevant: Live Email ọgụgụ isi Technology
Jenụwarị 20, 2016 na 11:20 PM
Nkọwa banyere Coca-Cola dị ka onye ọrụ ọ na-agwa m na nke a bụ ngwaahịa gafere ikike na ịba ụba nke azụmaahịa "obere" dị n'ezie?
Jenụwarị 22, 2016 na 3:14 PM
Ohere bụ na ọ bụrụ na ị na-eji Salesforce dị ka isi CRM maka ndị ahịa gị na enwere ike ịnwe nnukwu ndị na-ege ntị. Ahịa Salesforce site na obere gaa na ụlọ ọrụ, yabụ echere m bụ na ị nwere ike ịbụ nnukwu azụmaahịa buru ibu tupu ị mejuputa usoro ịntanetị e-commerce maka ya.